यस्तो आसनमा गर्नुहोस् योगा, ग्याष्ट्रिक तथा पेटको रोग निको हुन्छ - Enepal Serofero
यस्तो आसनमा गर्नुहोस् योगा, ग्याष्ट्रिक तथा पेटको रोग निको हुन्छ
काठमाडौँ,१९ असोज । के तपाई पेटका विभिन्न समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ ? यदि तेसो हो भने हरेक दिन यी आसनमा बसरे योगा गर्नुहोस् । तपाईलाई सताइरहेका पेट सम्बन्धी समस्याहरु निको हुनेछ । पेट तथा ग्याष्ट्रिकको समस्या हुने व्यक्तिले नियमित रुपमा योगा गर्नुपर्ने हुन्छ । योगा गर्दा खुल्ला हरियो चौर स्वच्छ हावा चल्ने ठाउँमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुनसुकै योगाको अभ्यास गर्दा कम्तिमा पनि ६ देखि १० पटक सम्म गर्नु पर्छ ।
१.पवनमुक्तासन : यो आसनमा योगा गर्दा उत्तानो परेर सुतेर दाहिने खुट्टा खुम्चाउने, बायाँ खुट्टा सिघा तन्काएर राख्नुपर्छ । हातले खुम्चाएको दाहिने खुट्टालाई समाती श्वास लिदै खुट्लाई आफुतिर तान्ने र चिउडोलाई घँडामा छुने प्रयास गर्दै करिब १० सेकेन्डसम्म श्वास रोक्ने र विस्तारैै श्वास छोड्दै टाउको तल गर्ने । त्यसपछि दुवै खुट्टालाई सोझो पार्ने, बायाँ खुट्टालाई पनि दाहिने खुट्टालाई खुम्चाएर दुवै हातले समाती श्वास लदै छोड्दै गर्ने । यस्तो आसनमा बसेर योगा गर्दाको फाइदा : यसरी दैनिक रुपमा योगा गर्दा स्त्री तथा गर्भसाय सम्बन्धी रोग हट्नुको साथै अम्लपित्त, मुटु रोग, जोर्नी तथा कम्मरको दुखाई,निको हुन्छ । साथै पेटमा वायु बिकार हट्छ र पेटमा भएको बोसो समेत कम गर्छ ।
२.नौकासन स्उ त्तानो परेर दुवै हातलाई तिघ्राको माथि राखेर सिधा सुत्ने र दुवै खुट्टालाई जोड्ने । त्यसपछि श्वास लिँदै हात खुट्टा र कम्मबरलाई एकै साथ भुइमा केही माथि उठाउने । हातलाई घुँडामा राखेर १० सेकेन्डसम्म श्वास रोक्ने, त्यसपछि विस्तारै छोड्दै जाने । नैकासनमा बसेर योगा गर्दाको फाइदा स्य दि मुटु, फोक्सो तथा आन्द्रामा भएका समस्याहरुलाई निको बनउँछ । कलेजो तथा पेटका रोगीहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
३.बालासन : बालासनको लागि घोप्टो परेर सुत्ने । बायाँ हातलाई टाउकोको तलतिर जमिनमा राऋने र गर्धनलाई दाहिनेतर्फ घुमाउँदै टाउकोलाई हातमा राख्ने । यस्तो अवस्थामा टाउको तल हुन्छ र बायाँ हातको हत्केला दाँया हातको तल हुन्छ । त्यसपछि विस्तारै दाँया खुट्टालाई घुँडाबाट थोरै मोडेर बालक सुतेजस्तै गरेर सुत्ने । बालासनको फाइदा : शारिरिक थकान, मनमा भएका नकारात्मक चिन्तन स्नायू दसर्वलता हराएर जानुको साथै मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ । यसो गर्नाले आन्न्द र उत्साहह मिल्छ । यसले डिप्रेशन उच्च रक्तचाप, अनिन्द्रामा फाइदा पुर्याउँछ । ग्याष्ट्रिक तथा पेटमा रोगहरु निको गर्नुको साथै मेरुदण्ड सम्बन्धी रोगलाई समेत निको गर्छ ।
४.भुजङगासन : यसको लागि दुवै खुट्टालाई सिधा पारेर घोप्टो पाररे सुत्ने र दुवै हातको हत्केलालाई भुइमा टेकेर टाउकोलाई आकाशतर्फ उठाई श्वास लिँदै छाती माथि उठाउने । केही बेर माथि हेरेर सास रोक्ने । श्वास छोड्दै पुनः पहिलेको अवस्थामा आउने ।
भुजङगासन गर्नुको फाइदा : ग्याष्ट्रिक तथा पेट सम्बन्धी रोगहरु निको गर्नुको साथै मेरुदण्ड सम्बन्धी रोगलाई निको गर्छ ।
५.धनुरासन : घोप्टो परेर सुती दुवै घुँडालाई मोडेर कुर्कुचालाई नितम्ब हिप माथि राख्ने घँडा र पातालाई मिलाएर राख्ने । तयसपछि दुवै हातले खुट्टाको गोली गाँठाको छेउमा समाती श्वासलाई भित्र भरेर घुँडा तथा छेउमा समाती श्वासलाई भित्र भरेर गोली गाँठा तथा तिघ्रालाई क्रमश उठाउँदै माथितिर तान्ने , हातलाई सिधा राख्ने । यस्तो आसनको योगा गर्दा नाभी तथा पेटको भाग भुईमा रहेको र पेट माथिको भाग छाती तथा टाउँकोलाई माथि उठाउँने ।
यसरी नाभी तथा पेट छेउको भाग भुईमा र बाँकी भाग उठेको हुनुपर्ने छ । यसो गर्दा शरिरको आकार धनुष जस्तो देखिएको हुनुपर्छ । यसो गर्दा १० देखि १५ मिनेट सम्म बस्न सक्नुपर्छ । विस्तारै स्वास छोड्दै जाने क्रममा श्वास प्रश्वास सामान्य भएपछि यो आसन र स्वास सामान्य भएपछि यो आसनलाई फेरि दोहोर्याउन सकिन्छ । यस्तो आसनका बसेर नियमित योगा गरेमा महिनावारी गडबढी, कम्मरको दुखाई, पेटसम्बन्धी भएका रोगहरु लाई फाइदा गर्छ । मेरुदण्डलाई स्वास्थ्य र लचिलो बनाउँछ ।
६.उष्ट्रासन : यो आसनमा बसरे योगा गर्दा कुर्कुचालाई माथि उठाउँदै त्यसमा दुबै हात राख्ने । घुँडाले भुईमा टेकेर श्वास लिँदै टाउँको एवं घाँटीलाई पछडी मोडेर कम्मरलाई माथि उठाउने गर्नुपर्छ । सकेसम्म पछाडी झुकेर श्वासलाई केहीबेर रोक्दै स्थिर बस्ने त्यसपछिश्वास छेड्दै कुर्कुच्चामा बस्ने गर्नुपर्छ । via~medianp
Prevयी चलचित्रमा छन् सेक्स डलसँग सेक्स गर्दै गरेका आपत्तिजनक दृश्यहरु !
Nextपशुपतिनाथले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल आश्विन २० गते शनिवार